LibreOffice 7.2 inosvika ichivandudza zvakanyanya kuenderana neOfisi | Linux Vakapindwa muropa
Mushure me v7.1.5, uye mushure memwedzi inopfuura mitanhatu yekuvandudza, Iyo Gwaro Sisekelo yakave nemufaro we zivisa kuvhurwa kwe LibreOffice 7.2. Ivo vanoenderera, uye vacharamba vachienderera, vachiwedzera iyo Community teki, sezvo Enterprise vhezheni ine yakagadziridzwa rutsigiro yave ichiwanikwa kubvira 7.1, asi iyi vhezheni ndiyo LibreOffice iyo vazhinji vedu tave tichishandisa kwemakore. Iyo purojekiti inopa iyi yekuvandudza seyakasimba kubatana, muchikamu nekuunza zvakajairika zvinowedzerwazve.
Mukusunungurwa kwega kwega, LibreOffice inovandudza kuenderana kwayo nehofisi inozivikanwa kwazvo, uye muLibreOffice 7.2, zvinodarika 60% yeshanduko kodhi inotarisisa kusabatana pamwe Mafaira eMicrosoft epamutemo. Iri basa rekuvandudza kuenderana chinhu chausingagone kurega kuchiita, uye hachizombove chakakwana. Avo vasingade chero kushamisika, zvakanaka, zvinokurudzirwa kushandisa Microsoft Office.
LibreOffice 7.2 Pfungwa
Mutsva murairo HUD yekutsvaga uye kuita zviito.
Musoro mutsva werima.
Fonti pani mubato rezasi.
Native rutsigiro rweApple M1.
Kunatsiridzwa kwekutsigira EMF / WMF metadata mafomati.
Kuvandudzwa kweOLE kwakasungwa muzvinyorwa.
Iyo yekumashure ye Skia-yakavakirwa dhizaini yakagadziridzwa.
Yakagadziridzwa yekumhanyisa kumhanyisa pamifananidzo mikuru.
Kumashure kunozadza kunogona kuvhara mapeji ese, kupfuura kumahombekombe.
Peji masitaira anogona kuve nemuganhu wekuparadzanisa.
Tsamba iyi inosangana inoratidza yambiro nezvezvisipo zvemadhata.
RDF metadata muChita muongorori.
Tsika dzemavara emetadata minda.
Calc ikozvino inogona kusefa neruvara muAustFilter.
Iwo matafura eHTML akanyorwa mune rekunze Dhata dialog ikozvino inoratidza zvinyorwa.
"Fat muchinjiko" cursor inowanikwa mune zvingasarudzwa.
Rudzi runogona kusarudzwa pane "Moving Avhareji" mafambiro mitsara.
Matemplate matsva: Candy, Freshes, Grey Elegant, Kukura Rusununguko, Yero Idea.
Makoramu mazhinji anogona ikozvino kushandiswa mumavara mabhokisi.
Kutungamira kuwana chiyero chinhu kuburikidza neyakajairwa bar.
LibreOffice 7.2 ikozvino iripo kurodha pasi kubva website yepamutemo. Iyo Gwaro Foundation inoramba ichikurudzira 7.1.5 sekuburitswa kwezvikwata zvekugadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice 7.2 inosvika neHUD nyowani uye ichivandudza zvakanyanya kuenderana neMicrosoft Office
MUMWE MUVERENGI akadaro
Ndinoziva kuti inyaya yakaoma kunzwisisa, asi ini ndinosuwa kuenderera mberi mumaduramazwi: angave ari ekugadzirisa kana zvakafanana. Uye ini ndinoti izvi zvakaoma nekuti mumwe munhu akazvipira kurudzi urwu rwebasa akanditsanangurira imwe nguva yapfuura. Asi hazvigone kurambwa, kubva mumaonero angu, kuti apa ndipo panokunda "makwikwi".
Pindura A VAVERENGI
Chinhu chimwe chete chinopfuura Hofisi: haina Ribbon reiyo c0j0nes